Ukuthandana ngoMatshi 8, umama kwindinyana, kwiprose
Okunye Ndiyakuvuyela Ndiyakuvuyela ngoMatshi 8
Ndiyakuvuyela umama ngoMatshi 8 kwisibongo kunye neprose.
Umama - umntu osondeleyo ebomini ngamnye wethu, nguye esikubona kuqala ekuzalweni aze akhumbule ubomi bakhe bonke. Uyasikhathalela ekuzalweni kwaye ecaleni ukuguga, uxolela zonke iipaki, uyamkela umntwana wakhe emva kweempazamo ezimbi kunye namazwi angcolileyo. Usuku lwaBafazi beSizwe ngamazwe ngumhla apho unokubulela umama wakho kuzo zonke izinto ezilungileyo abakwenzele zona, ukubonisa uthando kunye nokunyamekela. Ngaphandle kwekhadi leposi, linikezelwa ngo-Matshi 8, apho ukuchulumisa okubhaliweyo kubhaliweyo, kuya kubangela ukuba umomotheka ubuso bakhe obuhle. Ukuze wenze isipho sakho sikhumbule ixesha elide, yenza ingqondo yakho ukuba uyiqeshise okanye ukhethe ibini le mibongo enhle kwimini yabasetyhini bamazwe ngamazwe. Ukuba nomusa kunye nokunyaniseka okuvela kubantwana kunye neentombi kunokutyhafisa intliziyo yanoma yimuphi umama, kubangela isithwathwa sengqondo kunye neinyembezi zovuyo.
Ukuthintela iindinyana kumama ngoMatshi 8
Ndiyakuhalalisela ngomhla we-8 kuMatshi kwindodana yam
Imiba enomama evela kwintombi yakhe ngoMatshi 8
Ndiyakuvuyisana ngokunyanzela umama
Namhlanje, Mama, ndikubulela.
Ngenxa yokuba unawe kunye nothando lwakho.
Ube ngumlondolozi wezingelosi ukususela ebuntwaneni ...
Uhlala ugcwele unyameko, ububele befudumala ...
Uncede unzima ukufunda isifundo,
Yaye ikhekhe elimnandi kakhulu kum.
Usengomusa kwaye unomdla kum ...
Yonke ingqiqo, imonde kakhulu.
Unika, utyhi, - uyamomotheka, i-caresses yezandla,
Ungumcebisi wam, umhlobo wam, umhlobo wam omhle.
Kwaye ndinqwenela ngothando olunyanisekileyo
Kuwe impumelelo, ulonwabo, uvuyo, impilo !!!
Uthandi, othandekayo ngokubukeka okufudumeleyo,
Futhi thu thuzela uze ucindezele ...
Mama, ube nam uhlala ujikeleze,
Nguwe kuphela oza kuxelela nokuqonda!
Ndifudumala izandla zakho ezimangalisayo,
Akukho ngokwaneleyo kwaye ngamanye amaxesha buhlungu,
Awuyena nje umama, kodwa ungumhlobo othembekileyo.
Musa ukukrokra, kodwa uzive uxolo!
Abantwana bakhulela baza baphuma kwidleke,
Omnye uthatha, kwaye ngubani owa,
Kuphela sinethemba elinde rhoqo,
Umama kuphela nawe, uza kuhlwithwa!
Ndifuna ukuba uThixo akugcine njalo!
Le midlalo yayidlulile kude!
Nsuku zonke, ukuba uvuyo lunikezwa kuphela,
Smile kaninzi, ntanda, mntanda!
Umama, ilanga lam,
Ukhanyisa indlu yethu,
Ukuba sonke sihlangene.
Ebomini kuphela kuwe,
Musa ukuthatha ububele,
Happy birthday! Ngaloo mini
Yeka intlungu ihambe,
Ndiyakuvuyisela ngomhla wakho wokuzalwa!
Ufana nenyosi kuthi,
Phumla ubuncinane iyure,
Sonke sele sigcwele
Ehle kakhulu, ikhekhe - ithandekayo!
Yazi ukuba ndiqhayisa ngawe,
Kuwe konke endikufundayo.
Mama, othandekayo, phumula,
Umhla wokuzalwa wakho ngowakho:
Izitya ziyakwazi kwaye zihlale,
Ulungile kunomso kusasa.
Mamula, kukho izizathu
Kutheni nina madoda
Yintoni abamelwane abanomdla?
Kutheni abantwana bathanda oku?
Musa ukuba nomusa,
Kwaye akukho sipho kuwe,
Ndiya kuba njalo nje!
Bonke bathi kum: "Ubuhle!"
Uthanda wonke umntu,
Nangona unyaka uhamba.
Kodwa awuyi kutshintsha:
Yintoni engamashumi amabini, kuthekani ngoku:
Mhle. Ulula nje!
Ndiyakuvuyela usuku lokuzalwa olonwabileyo
Ndifuna wena, othandekayo.
Kwaye ndinqwenela ulonwabo.
Unina, ngomhla wesibhozo kaMatshi ndiyakuhalalisela
Wena ungcono kakhulu kwihlabathi, ndiyazi ukuba
Uyasithanda sonke, intsapho yethu
Yibani yindlela enhle emva kokulala
Yaye masibe nomdla ngaso sonke isikhathi.
Vumela i-pancake ibe yinto engcono,
Akukho nto, ukuba zihlambe.
Kwaye ndiya kuhlala ndikunceda,
Izitya ziya kuhlala zihlambulukile,
Ndiza kukuthenga enye ngelixa
Ukuphazamiseka kweCeram kuya kuba ngoku.
Andiyi kukhawuleza ukuba ndibuye ekhaya
Ndiza kuza ngcono emini, ukuze kungabi nakuvuka.
Undinike iminyaka engcono,
Ngoko yintoni, ukuba ndibe ngonaphakade.
Kodwa ngokubanzi ndikunqwenela ebomini,
Uvuyo kuphela, ukuhleka kunye nezona ziganeko ezilungileyo kakhulu!
Ndiyakuthanda, Mama, ube mnandi ngakumbi
Kwaye uphila ubomi ngobumnandi obuhle!
Unomama omhle kakhulu!
Lo mama ulawula njani yonke into:
Watshiza, wapheka, wageza iimpahla,
Fry pancakes, ngokukhawuleza isobho kwisitofu,
Iphulo eliphekiweyo, ulandele yonke indawo!
Mama othandekayo, ndiyakuvuyela,
Kwaye ndi nqwenela ukuba unganelisekile!
Ngokuqinisekileyo, ngokuqinisekileyo, akukho gram,
Ukuba intwasahlobo yayiyindodakazi,
Wayeza kuba nobuso,
Njengomama wethu ozukileyo.
Vumela inani libe sibhozo
Ngo-Matshi, kanye kuphela,
Into ephambili ndiwe nawe
Le mini idibanisa.
Ubomi bakho bonke ummangaliso ofanayo,
Masibe nosizi kuwe.
Ukukholisa abantu bomthonyama,
Izinto ezilungileyo kuphela ezenzekayo.
Ukuvuyisana okuthintekayo ngomhla we-8 kaMatshi kwintombi kaMama
Usuku lweSwitzerland lomsindo weentyatyambo,
Ngo-Matshi 8 yiholide yabasetyhini.
Kwaye ndikhawuleza kukuncoma,
Uhle kakhulu, Mama!
Ndikunqwenela unonwabo olukhulu,
Ikhefu lakho leentombi liphezulu,
Ndiyathanda ukuhlala ngonaphakade
Ngobuhle obuhle kangaka.
Gxuma emehlweni, entwasahlobo ebusweni,
Yenza yonke into ibe lula.
Yiyo yonke imibala kunye nele tshokoleta,
Intle, i-stylish, intsha!
"Kutheni uthanda unyoko?"
Kwaye ndahamba ndicinga ngento encinane.
Ndiya kunyuka kwi-mezzanine
Okanye angafihla kwindawo yokuhlambela,
Kwaye wayeza kuphuma ngengxolo
- Hayi ukuhlamba nokupheka
(Hayi, ngenxa yoko, ngokubanzi,!),
Kodwa le yonke i-SECONDARY
(O, yintoni ilizwi endiyaziyo!).
Ndiyamthanda umama ngenxa yesisa,
U bubele no kuqonda
Ukuze ubuhle kunye nenyaniso yokuba
Umama - oyintanda kakhulu!
Ezi ntyatyambo ziphela kuwe,
Umama - into enhle kunayo kum!
Ndithanda kuwe, okokuqala, uthando,
Njalo ekuseni kusasa ngeentyatyambo!
Ndi nqwenela ukuba uvele,
Vumela amehlo akho akhanye!
Makhe le mini ibe yinhle kakhulu,
Ewe, ebomini, vuyiswa!
Zininzi iingoma kunye neengoma
Andifuni amanye amagama abantu
Bonke basemphefumlweni wam,
Ngoko ndiyamthanda umama.
Akayena kuphela kwiSuku lwaBasetyhini
Kodwa yonke imini kaThixo
Ukugula okulula kunye nokuxhalaba,
Into endixelela yona!
Akukho mfazi ongcwele,
Kwaye ndiza kufumana inyanga.
Ndiyakuvuyela ngoMatshi 8
Ndiyakukubiza namhlanje. Ukuthozama
Kungcono kungekhona kuwe kwihlabathi!
Ndi nqwenela wena impilo,
Imide, imihla evuyayo!
Ndihlala eluthandweni lwam,
Phila, ungaze udala!
Ngaphandle kweebhodi zangasese ibhedi ende,
Ndiye ndahamba ndathetha ixesha elide.
Sekude kakhulu ukuyiqokelela,
Yaye ingcwele ukuba ndifunge: "Andiyi kumtshaya!"
Yaye i-appliqué ngoku
Ngephepha elinemibala ayiyi kusebenza.
(Nangona ndinako, kholwani,
Esinye isifiso kunye ne-anecdote)
Andiyidingi ikhadi lamacilongo,
Ndiza kuthetha ngothando nangothando.
Namhlanje, emva kwe-8 kuMatshi.
Mamulya, uvuyo lweholide!
Ndiyathokoza ngoMatshi 8, umama ondiyintanda: amagama achukumisayo
Emva koko, namhlanje kufike
Usuku lukaMatshi 8!
Ndiza kukuncoma umama.
Namhlanje ngumhla wakhe.
Ndiya kuba yintsimi kumama -
Andiyi kuba lithembeke kakhulu.
Ndiya kuvuka phambi komama,
Ukukhanyisa ukukhanya kuyo
Ndiza kubhala izikali zakhe.
Umama uyona mhle
Umama unokubangela ukuhleka
Ukuba kubi kumntwana wakhe.
"Umama" akulona ilizwi elilula,
Igama elincinane, othandekayo.
Mama, ndiyakudinga kakhulu!
Ngosuku lwabasetyhini ngoMatshi 8
Ndifuna ukuba mnandi:
Ukuba ngokukhawuleza entliziyweni yolonwabo -
Funda le mihlali!
Sithe satsho ukuba siye ebusika,
Isinyithi siphuthuma, sithatha ubushushu,
Kwaye iholide umama othandekayo -
Matshi 8 weza kuthi!
Iimvula ezikhethiweyo zeqhwa kumama,
Amaconsi phantsi kweendonga zephahla,
KukaMama, umhlaba wonke uphupha kwiigadi
Kwaye i-swallow igxobhoza ekhaya.
Ndiyabonga, Mama, ngomsebenzi,
Izandla zinyameko, zinyamekela,
Ukuze ube ekhaya ngeyure nganye
Ndi nqwenela kakuhle,
Ulonwabo, iintsuku ezivuyayo
Yiba nam, Mama, rhoqo,
Emva kwakho ufudumele!
Bangaphi abesifazana abasemhlabeni,
Kodwa kuphela enye-eyona nto ixhaphakileyo.
Naliphi na umntwana oza kukuphendula,
Ngomomotheka ukhangela phezulu ukusuka phezulu,
Eyona nto ibhetele kunene konke, kunjalo, umama!
Ndiya kumxelela uMama onothando,
Kwaye kwaye kuya kuba yinto eninzi kakhulu.
Wena ebomini bam - umntu okhethekileyo,
Mna othandekayo, ndiyakuthanda kakhulu!
Kwaye ndifuna ukunqwenela, othandekayo wam, oko
Ixesha elide liye landisa ixesha lolutsha.
Ukuze uhlale uvuya,
Hayi kuphela kwiholide, kodwa yonke imzuzu,
Ukumamatheka okungenakukhathazeka kaninzi -
Ukumamatheka kukukhanyisa ubuso bomama!
Mamulechka othandekayo, vumela usuku lomfazi kuwe
Inhlanhla iya kuncuma,
Makufezekiswe kwintleko enhle neyovuyo
Yonke into abantu bayithabisa injabulo!
Kwangathi yonke into enqwenelayo iyenzeka ngokukhawuleza,
Yonke imizuzu yovuyo inika,
Makhe amangalise ukukhanya kwamehlo akho avuya,
Yaye intliziyo iyayazi ukunqoba!
Umama! Uhle, njengentwasahlobo,
Usuke utsha nje ngumoya kusasa!
Matshi. Ihlabathi lavuka kwakhona ephupheni,
Isibalo 8 sisekhalenda.
Eli holide, mama, nguwe kuphela -
Ungcono kunabasetyhini kuwo wonke umhlaba:
Bulisa epaki amahlamvu,
Ukususa iqhwa elimnyama.
Ngomhla woBasetyhini, mama othandekayo, vumela
Kwintliziyo kwakhona ulutsha luya kuvuka,
Emthunzini, ukusuka kwamehlo ekude, ukudabuka kuya kupheka,
Yaye indlu yethu yothando iya kuphazamisa ilanga!
Ukuncoma ngokungaqhelekanga ngoMatshi 8 umama
Mama, ngoMatshi 8 yenye yeeholide zam intanda, kuba ngeli lilanga lokuqala ndiyakuvuyisana nawe. Ngaloo mini, ndiqonda ngokucacileyo ukuba ungumfazi, uyilumko kwaye ... ngoko ndiyidingayo. Ndiyakuthanda ukukholisa kwaye ubone indlela uvuyo olukhanyisa ngayo amehlo akho. Ndinqwenela ukuba uvuyayo, kwaye unonwabo unaphakade.
Ngomhla ka-8 kuMatshi kuyithuba elihle lokuphinda unqwenele impilo kunye nolonwabo, uMama. Masizalisekise onke amaphupha akho ngoku, sifanele ukufezekisa zonke izifiso, vumela uvuyo kunye nokuchuma kufinyelele ebomini bakho kunye nomoya wasentwasahlobo, kwaye ukwesaba kunye neengxaki ziya kunyibilika phantsi kwelanga le-Matshi, ukunika iifestile zothando.
Mama othandekayo, kulo suku olungumthombo wasentwasahlobo, ndivumele ukuba ndibonise lonke uthando lwam, yonke imfudumalo kunye neemvakalelo zakho. Ngamanye amaxesha, emva kwesigxina kunye nomjikelezo weentsuku, siyalibala malunga neyona nto ibaluleke kakhulu - abazali. Kodwa umfanekiso wam omhle uhleli ngonaphakade emphefumlweni wam, ndiyakhumbula yonke into ebomini umgca wezandla zakho zethenda kunye nezwi lakho lomthonyama elandibethela njengomntwana okhulayo. Mama, kulo suku oluhle ngoMatshi 8, ndifuna ukunqwenela uvuyo, ukuba amehlo akho amnandi akhanyise kuphela uvuyo. Kulungile, mawuzalise yonke iseli lakho kwaye uhlale kwintliziyo yakho. Ulonwabo lwabafazi kuwe, kuba ufanelwe. Ndonwabile iholide!
Unomama o mnandi! Ndiyakuvuyiswa ngeSuku lwaMaTyhini lwaMazwe ngamazwe, ekulungele iholide yakho, njengoko ungokoqobo yowesifazane oyinyani, unina, umfazi kunye nabo bonke abantu abaziyo ukuba ulungele ukuqinisekisile le nto kwaye banincomele ngalo suku oluqaqambileyo. Kusuka yonke intliziyo yothando ndiyanqwenela ukuzaliseka kwamaphupha onke amfihlelo, kuba ndiqinisekile ukuba bonke bahlambulukile, babenomusa kwaye baqondiswa kuthi, abantwana bakho abathandekayo nezihlobo.
Umama! Ndivumele ndivuyiswe ngo-Matshi 8 kwaye ndinqwenela ukufudumala, ukholo kunye nethemba kwikamva eliqaqambileyo elihle. Ndiyakuthanda kakhulu kwaye ndikholelwa ukuba ebomini bakho kuya kuba noMe ongunaphakade. Umphefumlo wakho mawusoloko ujabule kuyo yonke imihla. Wena ungumntu oyintanda kakhulu emhlabeni.
Umama! Ndiyakuvuyiswa ngeli holide yentsasa-mhla ngomhla kaMatshi 8. Ndikunqwenela impilo enhle, ulonwabo olukhulu nothando luthando. Ndifuna ukuba ufumane isitshixo kwindlela yokuphila yakho kwaye uhlale uhamba ngendlela efanelekileyo. Ngamana uThixo unokugcina! Ndiyakuthanda kakhulu kwaye ndikunxanela kuphela.
Bonke ubomi obusemhlabeni baqala ukuvuka entwasahlobo. Kwiimithi ezifihliweyo ziyaqhakaza, amaqabunga ahlaza, iintyatyambo ziyahluma, iintaka ziyafika. Mama, ndiyakuvuyela kwiSuku loLuntu lwaBasetyhini kwaye ndininqwenela entwasahlobo enkulu entliziyweni nasesitheni. Ukuqhaqhaza njenge-lily ithenda yesigodi ngoMeyi.
Umama ondiyintanda ndivuyayo ngo-Matshi 8 kwaye ndifuna ukunqwenela ulonwabo loluntu! Wena ungowona ungowona mhle, intanda kakhulu, intanda kakhulu! Yonke iminqweno yakho mayiyeke ukuzaliseka, nokuba yonke into iya kulungile! Ndiyakuthanda.
Iindinyana zezingane ezimangalisayo ngoMatshi 8 ngoomama nogogo
Inyanzeliso kakhulu ngoMatshi 8, 2018 kwivesi kunye neprose
Chastushki ngo-Matshi 8 kumakhwenkwe ngamantombazana, umama kunye nogogo. Umntu omdala onomtsalane we-chastushki kwiinkampani ngoMatshi 8
Isipho sokuqala ngoMatshi 8, izandla zam kumama kunye nogogo-ukusuka kwiphepha kunye neendwangu-zesikolo, i-kindergarten-Isipho esihle ku-Matshi 8 ngezandla zam iilekese
Ukuthokoza ngokusemthethweni amantombazana ukususela ngo-Matshi 8 kumakhwenkwe-ngamagama, ukunikezwa komculo, ukusebenza-esikolweni nakubisi-enkulisa - Iingcamango kunye nemizekelo yovuyo endifunda nabo esikolweni ngo-Matshi 8
Iingongoma ngo-Matshi 8
Ndiyakuvuyela ugogo ukususela ngoMatshi 8
Ubomi bentsapho bukaGgor Lifanev
Unganciphisa njani umzimba?
Yimiphi imisebenzi yeengxube zegazi?
I-Basque neKirikorov ibonise i-slippers ekuxhaseni iPugacheva, ividiyo
Izimpendulo ezahlukeneyo zokugonya kumntwana
Ukwesaba kwabantwana, iminyaka yobudala yentswelo
I-almond pie neebhilikri
Ukuba iimpawu zezodiac ziyahambelani, ndimele ndiyenze ntoni?
Indlela yokuphakamisa isimo sengqondo ngesondo nomyeni wakhe